शुक्रबार, श्रावन ३०, २०७७
Fri, Aug 14, 2020 at 1:04pm
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका थप ४ स्वास्थ्यकर्मीमा देखियाे कोरोना, संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीको संख्या २२ पुग्याे #आहा खबर# सिन्धुपाल्चोक पहिरो अपडेट: ३६ जना बेपत्ता, सातको उद्धार #आहा खबर# फेरि उकालाे तिर लाग्याे सुनको मूल्य #आहा खबर# कोशी अस्पतालको आइसोलेसनमा थप एक कोरोना संक्रमितको मृत्यु #आहा खबर# कालिकोट पहिरो: वडा सदस्यको घर पुरिँदा ६ जनाको मृत्यु #आहा खबर# आज पनि ओली-प्रचण्डबीच छलफल हुने, पाउला त नेकपाले निकास ? #आहा खबर# भरतपुर अस्पतालकी नर्समा कोरोना देखिएपछि आकस्मिक कक्ष सिल #आहा खबर# सिन्धुपाल्चोकमा भिषण पहिरो जाँदा २१ घर पुरिए #आहा खबर# रिचार्ज कार्ड विक्रेतालाई टेलिकमकले दियाे ८५ करोड छुट #आहा खबर# ६ घण्टादेखि लगातार भारी वर्षा, उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह #आहा खबर# कुखुराको मासुमा पनि भेटियो कोरोना भाइरस #आहा खबर# हेलिकप्टर चार्टर गरेर काठमाडौँ पुगेका पर्सागढी नगरपालिकाका मेयरमा कोरोना पुष्टि #आहा खबर# खुल्याे आइपीएल खेल्ने बाटो, महेन्द्र सिंह धोनीको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ #आहा खबर# कञ्चनपुरकाे क्वारेन्टिनमा करेन्ट लागेर मृत्यु भएकाे परिवारलाई दश लाख र श्रीमानलाई जागिर #आहा खबर# कर्मचारी र सेवाग्राहीको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ख्याल गरी सेवा दिन राष्ट्र बैंककाे निर्देशन #आहा खबर#
काठमाडौं। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवासायिक तालिम परिषद (सीटीइएभीटी) ले भदौ दोस्रो साताको लागि तय गरेको विभिन्न विषयको परीक्षा स्थगित गरेको छ। परिषदले बिहीबार यस्तो निर्णय गरेको हो। सरकारले मुलुकव्यापी लकडाउन साउन ७ गतेदेखि हटाएपछि परिषदले यसअघि स्थगित भएका परीक्षा भदौ दोस्रो साताबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। लामो दूरीका यातायात पनि भदौ १ गतेदेखि नै सञ्चालन गर्ने सरकारी निर्णयलाई आधार मानेर..
काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तत्काल परीक्षा सञ्चालन नगर्ने भएको छ। कोभिड –१९ को सङ्क्रमण बढ्न थालेपछि त्रिविले तत्काल परीक्षा नगर्ने भएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (पनिका)का परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले जानकारी दिए। यसअघि बन्दाबन्दी खुलेसँगै पनिकाले आगामी भदौ १६ गतेदेखि सेमेष्टर र असोजको पहिलो हप्तादेखि वार्षिक परीक्षाको तयारी गरेको थियो। 'हामीले स्थिति सहज भएपछि परीक्षाको तयारी गरेका थियौँ,' उनले भने, 'तर अहिले फेरि..
काठमाडाैं, २७ साउन । कोभिड –१९ को संक्रमण बढ्दै गएका अवस्थामा पूर्वसावधानी अपनाउन धुलिखेलस्थित काठमाडौंँ विश्वविद्यालयले मंगलबारदेखि १५ दिनका लागि बिदा दिएको छ। विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्राडा. सुबोध शर्माले सोमबार सूचना जारी गर्दै कोभिड–१९ को संक्रमण बढ्दै गएका कारण काठमाडौं उपत्यकालगायत काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका धुलिखेल र बनेपा नगरपालिका क्षेत्रमा पनि संक्रमण बढ्ने सम्भावना दृष्टिगत गरी पूर्वसावधानीस्वरुप सोमबारदेखि काठमाडौं विश्वविद्यालय मातहतका स्कूल (अत्यावश्यक र..
काठमाडौँ, २७ साउन । कक्षा १२ को गत वैशाखमा स्थगित परीक्षाको निकास छिट्टै खोल्ने तयारी भइरहेको छ । स्थगित परीक्षा नहुँदा लाखौँ विद्यार्थी अन्योलमा परेको तथा यसबाट नेपालका सबै विश्वविद्यालयका सबै स्नातक तहका कक्षा प्रभावित हुने भएपछि कक्षा १२ को परीक्षाबारे अब छिट्टै टुङ्गो लगाइने भएको हो । यो विषयको निकास पाए विद्यार्थीलाई स्नातक तह अध्ययन गर्ने बाटो खुल्नेछ । राष्ट्रिय..
काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायको स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका परीक्षाहरू स्थगित भएका छन्। कोरोना संक्रमण दरमा वृद्धि भएसँगै स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका विविध कार्यक्रम तथा सत्रका सत्रान्त परीक्षाहरू स्थगित गरिएका हुन्। यसअघि साउन ९ गते भदौको दोस्रो सातादेखि परीक्षा सञ्चालन हुने भन्दै सूचना प्रकाशित गरिएको थियो। त्रिवि व्यवस्थापन संकायको डिन कार्यालयले आज सूचना जारी गर्दै कोभिड-१९ को महामारी बढिरहेको र विभिन्न जिल्लामा..
काठमाडौं, २६ साउन । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र 'सिसिएमसी'ले विद्यार्थी भर्ना र परीक्षा सञ्चालन असोज १ बाट गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सिसिएमसीको आइतबार बसेको बैठकले तत्काल विद्यार्थी भर्ना र परीक्षा सञ्चालन गर्न नहुने प्रस्ताव गरेको हो । ५ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्यार्थी भर्ना र परीक्षा सञ्चालन भदौ १ गतेबाट खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको थियो । नोवेल कोरोना भाइरस संक्रमित र मृतकको..
काठमाडौं, २३ साउन । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा ११ को परीक्षासम्बन्धी कार्यक्रम तत्काल सार्वजनिक नगर्न विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। कोरोना कारण सरकारले हालसम्म विद्यालय पुनःसञ्चालनको निर्णय नगरिसकेको अवस्थामा विद्यालयले परीक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा विद्यार्थी तथा अभिभावकमा त्रास सिर्जना भएको भन्दै बोर्डले शुक्रबार एक सूचना जारी गरी सार्वजनिक नगर्न विद्यालयलाई निर्देशन दिएको हो। सूचनामा भनिएको छ,‘कोभिड १९ को संक्रमणका कारण नेपाल सरकारले हालसम्म..
काठमाडौं । लर्डबुद्ध एजुकेसन फाउण्डेसन र लायन्स क्लब अफ नेपाल डिष्ट्कि ३२५ बी१ बिच एक समारोहमा शैक्षिक सहकार्यकोलागी सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार, लर्ड बुद्ध एजुकेसन फाउण्डेसनमा सञ्चालीत शैक्षिक कार्यक्रमहरु ‘बी.एस्सी. आइटी’, ‘बीबीएम ईबीजनेश’, ‘एमबीए’ र ‘एम.एस्सी.आइटी’ मा प्रत्येक कार्यक्रमहरुमा हरेक वर्ष एक जना गरीब तथा जेहेनदार विद्यार्थीले ट्यूशन फीमा पूर्ण छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न सक्नेछन । लर्ड बुद्धले प्रदान गर्ने यो..
काभ्रे। काभ्रेपलाञ्चोक तेमाल गाउँपालिकाले आफ्ना सम्पूर्ण शिक्षकलाई होम क्वारेन्टिनमा बसाउने भएको छ। गाउँपालिकाले सूचना प्रकाशित गरी यही साउन २० गतेदेखि ३२ गतेसम्म गाउँपालिकाभित्रका शिक्षकलाई होम क्वारेन्टिनमा बस्न अनुरोध गरेको छ। सरकारले आगामी भदौ १ गतेदेखि विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेपछि गाउँपालिकाले जिल्ला बाहिर गएका आफ्ना शिक्षकलाई साउन २० गतेभित्र गाउँपालिका आइपुग्न आग्रहसमेत गरेको हो। गाउँपालिका अध्यक्ष सलामसिं तामाङले भने, 'होम क्वारेन्टिन बसाइपछि..
त्रिविकाे परीक्षा सञ्चालन तत्काल नहुने
काठमाडाैं, १६ साउन। त्रिभुन विश्वविद्यालयले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) का कारण स्थगित स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहको परीक्षा सञ्चालनका लागि केही समय पर्खने भएको छ । यस क्रममा विश्वविद्यालयले हालको परिस्थितिमा सुधार हुँदै गएका र कुनै विषम परिस्थिति सिर्जना नभएको अवस्थामा स्नातक तहको भदौ अन्तिम र स्नातकोत्तर तहको भदौ तेस्रो साताबाट परीक्षा लिने तयारी भइरहेको जनाएको छ । यसअघि सरकारले १ भदौबाट कक्षा सञ्चालन,..
एसईई नतिजा एक हप्तामा प्रकाशन हुँदै
काठमाडौं, १४ साउन। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा प्रकाशनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । आगामी एक हप्ताभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी भईरहेको बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गाप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण एसईई नहुने भएपछि विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्यांकनको आधारमा नतिजा सार्वजनिक गर्न लागिएको हो । विद्यालयहरूले जिल्ला समन्वय इकाइ मार्फत बोर्डमा पठाएको..
अब काठमाडौं महानगरका सबै विद्यालयमा १०० पूर्णाङकको स्थानीय पाठ्यक्रम अनिवार्य
काठमाडौं,१३ साउन । काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सबै संस्थागत र सामूदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीले अब अनिवार्य रुपमा १०० पूर्णाङकको स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले पहिलो पटक यहाँको पहिचान र संस्कृतिबारे जानकारी दिने उदेश्यले स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम तयार पारेसँगै विद्यार्थीले उक्त पूर्णाङकको पाठ्यक्रम पढ्नु पर्ने व्यवस्था गरेको हो। महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सबै संस्थागत र सामूदायिक विद्यालयहरूमा कक्षा १..
काठमाडौं। पर्याप्त तयारी नपुगेको गुनासो गरिए पनि सरकारले यही शैक्षिकसत्रबाट कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने भएको छ। सरकारले नेपालको संविधान, संघीय संरचना र समृद्ध नेपालको परिकल्पनानुकूल ‘विद्यालय शिक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६’ पारित गरी नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न लागेको हो। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई) को परीक्षा यसै साता प्रकाशन हुने र कोरोना महामारीका कारण रोकिएका शिक्षालयमा आगामी..
भदौदेखि विद्यालय खोल्न आन्तरिक तयारी सुरू
काठमाण्डु , १२ साउन। स्थानीय तहले आउँदो भदौदेखि कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम नभएका क्षेत्रमा विद्यालय खोल्ने आन्तरिक तयारी थालेका छन् । विद्यार्थीलाई मास्क अनिवार्य र सेनिटाइजर विद्यालयले व्यवस्था गर्ने गरी नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले यस्तो आन्तरिक तयारी थालेका हुन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले स्थानीय तहको परिस्थितिअनुसार विद्यालय खोल्ने तयारी गर्न विद्यालयलाई आग्रह गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सबै विद्यालयलाई खोल्न..
११ र १२ को परीक्षाको नाम ‘एसएलसीई’
काठमाडौं। कक्षा ११ र १२ को परीक्षाको नाम एसएलसीई राखिएको छ। कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन, मूल्याङ्कन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०७७ मा कक्षा ११ र १२ को परीक्षाको नाम एसएलसीई राखिएको हो। कार्यविधि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले स्वीकृत गरेको छ। ‘परीक्षा भन्नाले माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा ‘एसएलसीई’ अन्तर्गत कक्षा ११ को परीक्षा सम्झनुपर्छ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ। विद्यालयबाटै परीक्षा सञ्चालन..
काठमाडौं। अनेरास्ववियुले विद्यार्थी सङ्गठनसँग छलफल गरेर मात्र पढाइ र परीक्षा तालिका विषयमा निर्णय गर्न विभिन्न विश्वविद्यालयसँग आग्रह गरेको छ। आज अनेरास्ववियुका सहसंयोजक रञ्जित तामाङले विज्ञप्ति जारी गर्दै बन्दाबन्दी खोले लगतै विभिन्न विश्वविद्यालयले हठात् परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेकाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै विद्यार्थीसँगको छलफल गरेर मात्र पढाइ र परीक्षाको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका हुन्। ‘बन्दाबन्दीको बेला आआफ्नो घर गएका टाढाटाढासम्मका विद्यार्थीको आफ्नो ..
त्रिविकाे सेमेष्टर र वार्षिक प्रणालीका सबै परीक्षा दशै अघि नै हुने
काठमाडौं, ९ साउन । त्रिभुवन विश्व विद्यालयले बन्दाबन्दी खुलेसँगै रोकिएका सबै परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ । बन्दाबन्दी खुलेसँगै सेमेष्टर र वार्षिक प्रणालीका सबै परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका (पनिका) परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले बताए । उनले दशैं अगाडि नै रोकिएका सेमेष्टर र वार्षिक परीक्षा सञ्चालन गरिने जानकारी दिए । त्रिविले चाँडै नै परीक्षाका बारेमा सूचना प्रकाशित..
असोज पहिलो साताबाट कक्षा १२ को परीक्षा, भदौ ७ गतेबाट त्रिविको परीक्षा सुचारु हुने
काठमाडाैं, ८ साउन । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रणका लागि चार महिनाको बन्दाबन्दी खुला गरेलगत्तै शैक्षिक क्षेत्रले अब छिट्टै नै गति लिने भएको छ । जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्ने गरी आगामी भदौ १ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना, शैक्षिक तथा परीक्षा सञ्चालनका लागि सरकारले बाटो खोलेपछि शैक्षिक संस्थाहरूले बुधबारबाटै यसको तयारी सुरु गरेका छन् । यसक्रममा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२..
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पसहरु बुधबारबाट खुल्ने
काठमाडौं, ७ साउन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका क्याम्पसहरु बुधबारबाट खुल्ने भएका छन् । साउन ६ गतेदेखि लकडाउन अन्त्य भएसँगै शिक्षक÷कर्मचारीहरुको सार्वजनिक विदा पनि सकिएकाले साउन ७ गतेदेखि क्याम्पस तथा कार्यालयहरु सुचारु हुने त्रिविले जानकारी दिएको छ । क्याम्पसहरु खुले पनि विद्यार्थीहरुको नियमित पठनपाठन र पुस्तकालय सन्चालन भने नहुने त्रिवि रजिष्ट्रारको कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण सरकारले २०७६ चैत..
एसईई परीक्षाफल प्रकाशनमा ढिलाई हुने
काठमाडौं, ७ साउन । एसईई परीक्षाको परीक्षाफल ढिलो प्रकाशित हुने भएको छ । करिब ३० जिल्लाबाट प्राप्ताङ्क नआइपुगेका कारण ढिलो हुने भएको हो । निरन्तर बाढीपहिरोका कारण कर्णाली प्रदेशका ९ जिल्लाका कुनै पनि विद्यालयको प्राप्ताङ्क पनिकामा पुग्न सकेको छैन । सुदूरपश्चिम र प्रदेश १ को पहाडी जिल्लाका केही जिल्लाका विद्यालयले अहिलेसम्म प्राप्ताङ्क उपलब्ध नगराएका कारण परीक्षाफल प्रकाशित हुन ढिलो हुने भएको..
विद्यार्थी भर्ना र परीक्षा सञ्चालन गर्न बाटो खुला
काठमाडौं। सरकारले आज मध्यरातदेखि लागू हुने गरी लकडाउनको विधिवत् अन्त्य गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि लागू गरेको लकडाउन आज मध्यरातदेखि हटाइएको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले लकडाउन घोषणा गरिएको झण्डै चार महिनापछि जनजीवन सामान्य बनाउने ध्येयका साथ सरकारले त्यसको विधिवत् अन्त्य गरेको जानकारी..
नेविसंघले लगायाे त्रिवि पदाधिकारीको कार्यकक्षमा ताला
काठमाडाैं, ५ साउन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारको कार्यकक्षमा ताला लागेको छ । नेविसंघका नाममा आइबार ताला लगाएको त्रिविका रजिस्ट्रार प्रा.डा. पेसल दाहालले बताए । त्रिविमा नियुक्तिको भागबन्डाको विषयमा विवाद हुँदै आएको छ । नेविसंघको त्रिवि समितिका सभापति हरि आचार्यले नेविसंघले विभिन्न माग राखेपछि उपकुलपतिले कुनै छलफल नगरेको र सुनुवाइ पनि नगरेकाले ताला लगाएको बताए । उपकुलपतिले जुनसुकै नियुक्तिमा..
काठमाडौं। निजी विद्यालयहरुले भोलिदेखि अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने भएका छन्। प्याब्सन र एनप्याब्सनको बुधबार बसेको बैठकले सरकारले आफूहरुका माग पूरा नगरेको भन्दै अनलाइन कक्षा सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेका हुन्। उनीहरुले शिक्षक र कर्मचारीलाई समेत बेतलबी बिदामा राख्ने निर्णय गरेका छन्। सरकारले लकडाउन घोषणा गरेसँगै निजी विद्यालयहरुले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका थिए। निजी विद्यालयहरुले न्युनतम शुल्क लिन पाउनुपर्ने, विद्यार्थी भर्ना गर्न..
काठमाडौं, ३१ असार । लकडाउनमा रोकिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को परीक्षाबारे निर्णय शुक्रबार आउने भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोसीले परीक्षाको बारेमा अहिले छलफल भइरहेको बताउँदै आगामी शुक्रबार निर्णय आउने जानकारी दिए। ‘परीक्षासम्बन्धी गठित समितिसँग आज पनि छलफल गर्दै छौँ,’उनले भने,‘हिजो पनि छलफल भयो। परीक्षा कहिले गराउने वा नगराउने विषयमा शुक्रबार निर्णय आउँछ।’ उनका अनुसार समितिले परीक्षाबारेको प्रतिवेदन बुझाएको छ। सो प्रतिवेदनलाई दुई चरणमा छलफल..
स्थानीय तहकाे दबाबमा राजधानीबाहिर विद्यालय खोल्ने तयारी
काठमाडाैं, ३१ असार । देशभरका स्थानीय तहले लकडाउनमा बन्द विद्यालय खोल्न दबाब दिएका छन् । राजधानी बाहिर कोरोना संक्रमणको संख्या घट्दो क्रममा रहेपछि स्थानीय तहले विद्यालय खोल्न दबाब दिएको हो । सातै प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको अधिकारीहरूको बैठकमा सबै प्रदेशको सामाजिक मन्त्रालयले स्थानीय तहमार्फत विद्यालय खोल्न माग गरेको हो । त्यसलगत्तै मन्त्रालयले विद्यालयल खोल्ने..
Results 937: You are at page 1 of 32
सिन्धुपाल्चोक पहिरो अपडेट: ३६ जना बेपत्ता, सातको उद्धार
फेरि उकालाे तिर लाग्याे सुनको मूल्य
कोशी अस्पतालको आइसोलेसनमा थप एक कोरोना संक्रमितको मृत्यु
कालिकोट पहिरो: वडा सदस्यको घर पुरिँदा ६ जनाको मृत्यु